Coronavirus Vaccine Nkeonwe Covid19 Innoculation Pfizer Biontech - Okporo zọ Harley
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 15, 2021 Site na Ọgwụ Harley Street
Ndị nchịkwa UK anabatala ọgwụ mgbochi Oxford nkeonwe ma atụ anya na ịgba ọgwụ mgbochi nke a ga-adịkwa n'oge na-adịghị anya.
Kedu ka Pfizer Coronavirus si ekpughe 19 Vaccine nyere?
Dị ka ogwu ogbugba n'ime ogwe aka dị elu.
Kedu onye nwere Coronavirus Covid 19 ịgba ọgwụ mgbochi?
Vaccingba ọgwụ mgbochi Covid-19 dịịrị mmadụ niile.
Kedụ ka m ga-esi nweta ọgwụ mgbochi Coronavirus?
Please download and use the contact form to register your interest in the Pfizer Vaccine. Once the vaccine is released, dọkịta gị Harley Street ga-ewere ohere ịme gị ọgwụ mgbochi mgbe ị gara ịwa ahụ maka ebumnuche izugbe, ma ọ bụ maka ịgba ọgwụ mgbochi flu gị kwa afọ.
Inwere ike inweta ya n’otu oge ahụ ọria flu jab gị ma ọ bụrụ n’achọ.
Ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị na ị nwere ike ileghara ọgwụ mgbochi Coronavirus, kpọtụrụ gị Ọgwụ Harley Street ịhazi ọkwa iji nweta ọgwụ mgbochi.
A ga - enwe nsogbu ọ bụla na ọgwụ mgbochi Coronavirus n'onwe?
Ọ bụ ihe zuru oke ịnweta ịcha ọbara-ọbara na ahụ erughị ala na saịtị ịgba ọgwụ mgbochi, yana isi ọwụwa, mana mmetụta ndị a ekwesịghị ịdị karịa ụbọchị ole na ole. Hụ GP gị ma ọ bụrụ na ị nwere nsonaazụ na-adịgide karịa ụbọchị ole na ole, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị mepee ọkụ mgbe ịnwe Pfizer Coronavirus Vaccine Private.
Enwere m ike ịnweta ọgwụ Covid19 na nzuzo?
Pfizer Covid019 Coronavirus jab dị na nzuzo, mana ọ dị oke ọnụ ma nwee mkpụmkpụ mkpụmkpụ. Na-atụ anya ịkwụ ụgwọ n'etiti £ 1000 na £ 2000.
Anyị nwere ike inye ndụmọdụ ma ọ dị mma ka inwee, mana ị ga-agara ụlọọgwụ anyị nkeonwe iji hazie ya.
Biko pịa njikọ dị n'okpuru iji mezue ụdị iji gosipụta mmasị gị.
Onwe Covid19 Vaccine Form